Sidee loo Qiyaasaa Mashruucaaga Websaydhka ah | Martech Zone
Sida loo Qiyaaso Mashruucaaga Websaydhka ah
Friday, May 28, 2010 Axad, Agoosto 10, 2014 Douglas Karr
Goorma ayaa la qaban doonaa?
Tani waa su’aasha ah i hayaa markaad xiganayso mashruuc. Waxaad u maleyneysaa markaad sidan sameysay sanado inaan awoodi doono inaan soo xigto mashruuc sida dhabarka gacantayda ah. Maaha sida ay u shaqeyso. Mashruuc kasta waa cusub oo wuxuu yeelan doonaa caqabado u gaar ah. Waxaan hayaa hal mashruuc oo 30 maalmood dib uga dhacay si fudud sababtoo ah isbadal yar oo uu sameeyay an API inaan awoodin inaan ka shaqeyno agagaarka. Macmiilku wuu igu xanaaqsan yahay - waa sax sidaas - waxaan u sheegay inay qaadanayso dhawr saacadood oo keliya. Ma ahayn inaan been sheegay, ee waa inaanan weligey qiyaasin in muuqaal muuqaalkiisa laga dhimanayo API in aan ku tiirsaneyn. Ma aanan haysan ilo aan ku dhammaystiro ka shaqaynta arrinta (waannu soo dhowaanaynaa, in kastoo!).
Waxaan diidayaa inaan aado dhanka kale oo aan saacado ka qaado halkii aan ka qiyaasi lahaa mashruuca, in kastoo. Waxaan u maleynayaa in bixinta saacado ay ku dhiirigalinayso qandaraaslayaashu in ay ku baxaan waqti-dhaaf iyo miisaaniyad ka badan. Mashruuc kasta oo aan hadda qof kale lacag siinayo saacado ayaan shaqeynin. Dhammaantood way soo daaheen, shaqaduna way igu adkaatay. Taas bedelkeeda, mashaariicdii aan ku bixiyay khidmadda mashruucu waxay ku yimaadeen waqtigii loo qabtay oo waxay ka bateen filashooyinka. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ka badiyo macaamiisha aan filayo.
Afar qalad oo qarxin doona qiyaastaada xigta:
Khaladka Koowaad: Xisaabi inta ay kugu qaadaneyso inaad sameyso wixii macmiilku codsaday. Khalad Adigu waxaad sameysay qaladki kuugu horeeyay waxaadna qiyaastay waxa macmiilku kaa codsaday, ee maahan waxa macmiilku runtii wuu rabay. Labaduba marwalba way kala duwan yihiin macmiilkuna wuxuu had iyo jeer doonayaa laba jibbaar nus qiimaha.
Khaladka labaad: Maadan tixgelin dib u dhaca macaamilka. Ku dar dib u dhigis laba toddobaad ah mashruuca maxaa yeelay waaxdooda IT-ga kaa heli meyso marin-u-helidda aad u baahan tahay. Had iyo jeer waxaan isku dayaa inaan u sheego macaamiisha, haddii aad "A" iigu hesho taariikh cayiman, markaa waan bixin karaa. Hadaadan sameyn Ma ballan qaadi karo taariikh kasta. Jaantuska 'Gantt' si sixir ah uma beddelo, waxaan haystaa macaamiil kale iyo shaqooyin horeyba loo qorsheeyay.
Khaladka saddexaad: Waxaad u oggolaatay macmiilka inuu kugu cadaadiyo gaarsiin hore. Kumaad darin maaraynta qaladka iyo imtixaanka. Macmiilku wuxuu rabay inuu dhinto kharashka markaa waxay ku yiraahdeen si fudud u dhammee. Jawaab qaldan! Haddii macmiilku uusan bixinaynin khalad-u-qabashada iyo tijaabinta, markaa naso-hubi inaad saacado badan ku qaadan doontid ciladaha iyo hagaajinta dayactirka ka dib markii aad nooshahay. Ujuuji si kasta ha noqotee - shaqada ayaad qabanaysaa hadda ama goor dambe.
Khaladka afaraad: Filashaduhu way isbadalaan inta jidka lagu jiro, jadwalka ayaa xumaada, mudnaanta ayaa la bedelaa, dhibaatooyin kaa soo aadan ka filaynin ayaa soo ifbaxaya people. Waxaad had iyo jeer noqon doontaa wax badan ka dib sidii aad filaysay. Ha aqbalin waqtiga la soo gaabiyey cadaadis uga yimid macmiilka. Haddii aad ku dhegi lahayd rajooyinkaagii hore, waxaad u malayn lahayd inaad iyaga ka dhigi lahayd!
Dhawaan, waxaan bilownay qandaraas shirkad halkaas oo aan ku heshiinay hoos u dhigista mashruuc ka dibna sicirka billaha ah ee kor u qaadista iyo dayactirka. Waan fadhiisanay oo waan isla hadalnay yoolalka iyo waxa mudnaanta ay ahaayeen - oo waligood xitaa ka hadlin isdhaafsiga isticmaale, qaabeynta, ama gabal kale. Waxaan dejinay taariikh adag 'go live' oo dagaal badan, laakiin Pat wuxuu si buuxda u fahmay in mashruuca laga yaabo inuu ka sii socdo muuqaalada qaar marka loo eego kuwa kale. Waxaan qodnay daahfurka oo waxaan horeyba ugu soconeynaa liis kor loogu qaadayo. Ka sii muhiimsan, labadeenaba waan faraxsanahay.
Ma afuufo qiyaaso badan laakiin wali marmar ayey dhacdaa. Xaqiiqdii, waxaan diyaar u ahay inaan dib u soo cesho qandaraas dhowaan maxaa yeelay, ka dib markii aan ka shaqeeyay dhowr mashruuc oo aan la qaatay macmiilka, waan ogahay in kastoo macmiilku ogolaaday himilooyin aan caddayn, haddana ma faraxsanaan doonaan inay helaan mooyee toban jeer waxa qandaraaska qiimihiisu yahay. Waxaan kaliya jeclaan lahaa inaan horay u arko dadkan. Iyaga u baahan si ay u kiraystaan ​​kheyraadkooda saacad kasta… helitaanka qiyaas mashruuc ku saleysan iyaga waa dilaa.
Waxaan bilaabayaa inaan ogaado waxa ka dhexeeya mashaariicda guuleysta ee aan gaarsiinay ama aan wado. In badan oo ka mid ah runtii waan ka bartay Tababarka iibka anigoo kaashanaya tababarahayga, Matt Nettleton. Waxaan sidoo kale gartay in inta badan guulaha mashaariicdaydu ay bilaabmeen ka hor intaanan weligey xitaa saxiixin macmiilka!
Sida Loo Musbaarsado Qiyaasta:
Jaantus saar markuu macaamilku filo. Waa filashooyinkooda kuwa ugu muhiimsan. Waxaad ogaan kartaa inaad haysato hal sano oo aad ku dhammaystirto shaqada. Maxaa loo qiyaasayaa 2 toddobaad haddii ay ku faraxsan yihiin 2 bilood? Weli waad ku dhammaysan kartaa shaqada 2 toddobaad gudahood oo waad ka badnaan kartaa dhammaan waxyaabaha laga filayo!
Jaantus saar waxa ku habboon macmiilka. Haddii aadan ogaan karin waxay u qalanto, ka dib ogow waxa miisaaniyaddu tahay. Ma dhammayn kartaa mashruuca oo ma ka badnaan kartaa waxyaalaha laga filayo iyada oo ku saleysan miisaaniyaddaas? Kadib samee. Hadaadan awoodin, markaa iska dhaaf.
Muuji waxa hadafka mashruucu waa. Wax kasta oo ka baxsan hadafka waa wax ka baxsan oo dib looga shaqeyn karo. Ka shaqee sidii aad u dejin lahayd yoolka oo aad u dhammayn lahayd himiladaas. Haddii hadafku yahay in la helo blog bilow ah oo socda, ka dibna kor u qaad blog-ka oo socda. Haddii ay tahay in la dhiso is-dhexgal soo diraya emayl, markaa u soo dir si ay u soo dirto emayl. Haddii ay tahay in la yareeyo kharashka helitaanka, hoos u dhig qiimaha. Haddii ay tahay in la soo saaro warbixin, hel warbixinta oo ha shaqeyso. Pretty mar dambe ayuu yimaadaa isla markaana hagaajinta saxda ahi waxay ku imaan kartaa qiimo aad u badan oo leh jadwal dagaal ah. Ka shaqee waxa ugu muhiimsan.
Dib gadaal uga shaqee heerkaaga sare. Inta badan macaamiishaydu igama adeegsadaan howlaha liidata, waxay helayaan qiimahooda iyagoo igu garaacaya waxyaabaha waaweyn weyna buuxinayaan si ay u dhamaystiraan shaqada fudud. Waan jeclahay macaamiishaas waxaanan higsanayaa inaan labadaba ka badiyo rajadooda oo aan siiyo qiimo ka badan inta ay bixinayaan. Dhamaadka mashaariicdeena, inta badan waxaan ka hooseeynaa miisaaniyadda ama himilooyin ka weyn, waxaanan ku hor maraynaa jadwalka. Waxay i siinayaan qol ku filan oo aan kaga badiyo waxyaabaha ay filayaan… waa wax fudud.
Weli waxaa igu cadaadinaya inaan yareeyo siciradeyda oo aan horay u dhameysto, waxaan u maleynayaa in maamule kasta uu u maleynayo inay taasi tahay waxa hadafkoodu yahay markay la shaqeynayaan qandaraasleyda. Aad ayey u xun tahay inay yihiin kuwa aragti gaaban. Waxaan si fudud ugu ogeysiiyaa macaamiisha in waqtiyada gaagaaban iyo lacagta kayar ay saameyn toos ah ku yeelanayso tayada shaqada ay ii kiraysteen. Waxa ugu weyn ee ku saabsan bixinta qandaraasle weyn waxa qiimihiisu yahay waa inuu wax geeyo… waadna filan kartaa inuu wax geyn doono. Markaad sii wado jarista ama garaacista qandaraasleydaada ilaa aad disho, ha la yaabin goorta ma jiro iyaga weligoodba way shaqeeyaan. 🙂
Aniguba sidoo kale waa layga qaataa markasta. Markii ugu dambeysay ee ay dhacdo, shirkaddu waxay dooratay xalka muddada-gaaban ee ay tahay inay dib-u-horumariyaan macmiil kasta. Qiimahaygu wuxuu ahaa qiyaastii 1.5 jeer qiimaha, laakiin waxaan u socday si aan u dhiso si ay dib ugula isticmaalaan codsiga mid kasta oo ka mid ah macaamiishooda. Agaasimihii guud ayaa runtii igu qoslay markii uu ii sheegay inta uu "badbaadiyey" qandaraaslaha kale (qandaraasle aan soo jeediyay). Afar macmiil hadda laga bilaabo, wuxuu ku bixin doonaa wax ka badan 3 jeer kharashyada fulinta. Dummy
Waan dhoolla caddeeyay, waxaanan u dhaqaaqay macmiilkayga xiga ee kan faraxsan, ka guusha badan, iyo ka macaash badan.
Tags: qiyaasta mashruucawaqtiga mashruucamashruuca webkamashruuca boggamashruuca boggajadwalka mashruuca boggajadwalka waqtiga
Samaynta Dacwad Loogu Talo Galay Suuq Geynta Emailka
Wax soosaarka: "Soomi, Jaban, Fiican" Rubrik
Si fiican ayaa loo yidhi Doug. Weli waan la halgamayaa tan sidoo kale. Markii la i waydiiyo goorta aan dhammaystiri karo degel, waxaan bartay inaan ka jawaabo, “taasi waxay kuxirantahay sida aad uga jawaab celiso wax kasta oo aan codsado.”
Waan ku faraxsanahay sida runta ah ee aad u sheegatay, Doug. Waxaan ku dari lahaa hal tababar oo kale oo fiican - inaan kula socodsiiyo macmiilka oo aan noqdo mid hufan. Waxaas oo dhami waxay qiyaasayaan xoogaa aaminaad ah.